Warshadaha Tareenka iyo Nidaamyada Maareynta Tayada | RayHaber | raillynews
HomeWarqad Hordhac ahWershadaha Tareenka iyo Nidaamyada Maareynta Tayada
11 / 05 / 2020 Warqad Hordhac ah, TURKEY
warshadaha tareenka iyo nidaamyada maaraynta tayada
Haddii warshadaha tareenka loo tixgeliyo dhinaca tayada tayada, waxay dejin kartaa tiro badan oo heerar iyo nidaamyo maareyn. Ballaca dalabka wuxuu leeyahay dalabyo badan oo ku saabsan warshadahaas oo dhameystiran.
ISO 9001: 2015 Nidaamka Maareynta Tayada ee Tareenka
Waxaa loo tixgaliyaa awowgii heerarkasta heerarka, ISO 9001: 2015 nidaamka maareynta tayada ayaa ah heerka ugu hooseeya ee looga baahan yahay. Nidaamka maareynta ee ISO 9001 ayaa si sahlan loogu isticmaali karaa meel kasta oo ka mid ah kaabayaasha tikniyoolajiyada isku dhafan ee u dhexeeya dhammaan shaqaalaha maamulka maareynta qaybta tareenka iyo silsiladaha sahayda ku xiran.
ISO 45001, 2018 Occupational Health iyo Management System for Safety Systems Rail
Badbaadada shaqadu waxay isku aragtaa heerarka lagama maarmaanka u ah qaybaha culus iyo khatarta sare sida tareenka. Sidaas badan si ay u dhow yahay lagama maarmaan ah si ay u hirgeliyaan nidaamka maamulka badbaadada shaqada ka ISO 45001. Xitaa haddii nidaamka OHS uusan ahayn heerkaan, waxaa xaqiiqdii laga hirgalin lahaa dhammaan khadadka ganacsiga ee ay daboolaan nidaamyada tareenka. Adlbelg in Anigoo ku hadlaya magaca waxaa ka mid ah, waxaan si fudud u muujiyaan karaa in ISO 9001, tareenka u dhalaa Kanu waa warka culus oo ka mid ah xaaladaha sharci khasab ah qaybta ugu, is barbardhigi kartaa baabuur ugu cuslaa ee in ISO 45001.
OHS la xiriira on tareenka tusaalaha soo socda Xitaa baarista waxay ku filnaan doontaa fahamka sida ay muhiim u tahay dukumintigaani waaxdu.
Heerka Farsamo ee Teknologiska ah ee aan la Aloosan karin: ISO 27001: 2013 Nidaamka Maareynta Amniga Macluumaadka
Warshadaha nidaamyada tareenka, iyada oo aan loo eegin sida loo tixgeliyo, waxaa ku jira tikniyoolajiyad badan oo cusub marka loo eego codsiyada amniga macluumaadka.
size ee shirkadaha waaxda tiro badan oo ah shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah, iyo shirkadaha waaweyn ee heerka isku-qeybiyeyaasha ay, xoogga saaraan ammaanka macluumaadka macaamiisha. Intaa waxaa sii dheer, maadaama hay'adahaani inta badan yihiin hay'adaha dowliga ah iyo kuwa dowliga ahba, ISO 27001 waxay daaha ka qaaday muhiimadda amniga macluumaadka.
Halaynta iyo maareynta macluumaadka leeyihiin meel kala duwan ee tareenka. Kaydinta naqshadaha, tikniyoolajiyada ugu dambeysay iyo wax soo saarkooda, moodellada yutiilitida iyo macluumaadka rukhsada ayaa kaliya lagu heli karaa ISO 27001 Waxaa si hufan waa sababtaa tan aan qeybiyeyaasha haysta inay ka qayb qaataan qandaraasyada guud ku milmaan iyo alaab-kasta oo caddeynaya nidaamka maamulka, kuwaas oo si gooni gooni ah.
Haddii aad soo saareynaa in hay'adaha dawladda, waa waajib in la helo shahaadooyinka ISO, kuwaas oo heerka sharci.
ISO 10002 Cabashada Macaamiisha iyo Nidaamka Maareynta Qanacsanaanta
Work on tareenka kuma dhammaanayo oo keliya alaabta iyo adeegyada la gaarsiiyo. Marka ay timaado in nolosha aadanaha dhamaadka ganacsiga, hawlihiisa oo iibsada iyo qancinta macaamiisha hufan waa in ay u dhow hufan.
Alaabo kasta oo fursad u leh in lagu adeegsado jidadka tareenka iyada oo aan la marin tijaabooyin iyo kontaroolo badan. Maanta, kumanaan ka mid ah qaybaha iyo farsamooyinka uu ka samaysan yahay nidaamka tareenka a waa in la waafajiyaa heerarka oo dhan. Waa la arki karaa inay jiraan heerar badan oo ay tahay in lagu raaco wax soo saarka wadooyinka tareenka.
Khasabka ah CE shahaado Qaybo
Waa wax aan loo maleyn karin in qayb kasta oo aan lahayn shahaadada CE gawaarida nidaamka tareenka. In kasta oo qaddarka khaladka aan la aqbali karin waaxda amnigu ku saleysan tahay, maahan khalad in la yiraahdo kooxda kaliya ee la aqbali karo khaladaadka ma ahan marka laga reebo xaaladaha sayniska. Si kastaba ha noqotee, xitaa tan looma tixgelin karo cudur daar.
Xalka kaliya ee dhibaatooyinka badan sida nidaamyada korantada, qeybaha ka shaqeeya cadaadiska iyo culeyska oo xirta si joogto ah, iyo u weecinta biraha xagaaga iyo jiilaalka ayaa sare u kacaya badeecada calaamada CE oo kaliya nidaamyada tareenka.
Si ka duwan nidaamka maamulka, calaamadda CE ka kooban yahay qaybo ka mid kaliya ee u hoggaansamaan shuruudaha Midowga Yurub la siiyo si ay badeecada. Waa wax aan macquul aheyn in la haysto shahaadada CE iyada oo aan la helin nidaam maarayn sida ISO 9001: 2015.
Ugu dambeyntii Nidaamka Maareynta IRIS
Heerka Tareenka Caalamiga ah “International IRIS Standard” waa halbeeg maareyn tayo leh oo loo sameeyay warshadaha tareenka waxaana loo qoray oo keliya nidaamyada tareenka sida tareenka, mitrooga, taraamka, wagon, tareenka. Ma ahan wax sahlan si ay u hirgeliyaan caadiga ah IRIS ah, kaas oo si buuxda u darbay codsiyada tareenka. Qaadashada nidaamka maareynta IRIS sanadkii 2014 khasab ah waxayna bilaabatay in ay codsato TCDD dukumiinti rasmi ah oo ah xaalad jilicsan.
Sida aan ku soo sheegnay bilowga ah ee our article, IRIS caadiga ah, taas oo uu leeyahay qaar ka mid ah hannaanka halis ah oo dhan hababka maaraynta, go'aamiso mabaadii'da aasaasiga ah ee qaybta.
Isku soo wada duuboo, qaybta tareenka, oo xaaladooda warshadeed ee culus ay ku sii adkaaneyso khad cad, waa inay lahaato nidaam maareyn oo u hoggaansan dhammaan heerarka halkan lagu qoro, waana inay lahaato shahaadooyinka ISO iyagoo u gudbinaya xisaabaadka oo leh dhibco aad u sarreeya.
ISO 9001 Maaraynta Tayada Nidaamka Seminar
Shirka caalamiga ah ee warshadaha tareenada
2. Shirka Wakaaladaha Shidaalka ee Caalamiga ah
2. Shirkadda Shidaalka ee Shidaalka ee Caalamiga ah ayaa bilowday!
TÜDEMSAŞ waxay ka qaybgashay Shirka Saxeexa iyo Teknolojiyada
Heerka Wershadaha Tareenka Caalamiga ah ee Sazcılar Warshadda baabuurta 2aad…
4. Shirka Caalamiga ah ee Warshadaha iyo Teknolojiyada Tareenka
SAARK MER Steel Steel InnoTrans at 2016
Horumarka cusub ee TCDD A iibsan tareen tayo fiican leh
TÜVASAŞ waxay heshaa Abaalmarinta Tayada TSE